ပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်၊ Livescript ကို 1995 ခုနှစ် စက်တင်ဘာ လတွင် တရားဝင် language အဖြစ်
သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်၊ဒါပေမဲ့ 1995 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်နေ့မှာပဲ sun Microsystems (magazine )က
ဒါကတော. အမြည်းလေးပါဘဲ ဆက်ပြီး နှံ.နှံ.စပ်စပ်လေ.လာချင်ပါက
စာအုပ်တစ်ခုလုံးကို ဒေါင်းယူချင်ပါက ဒီမှာ ဒေါင်းယူပါ။ အလကားရတုန်းယူထားပါ ခင်ဗျာ--- :P။
Posted by မောင်မောင် at 19:58
စာအုပ် share ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး ဂါ ဒီ ။
စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ် ခင်ဗျာ။ မျှဝေပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ဟုတ်ကဲ. အစ်ကို ah နဲ. အစ်မ jet တို.ခင်ဗျာ သူငယ်ချင်းကျော်ကိုအစား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။